အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသောမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးလေးကို အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်မွတ်ကုလား သားမယားရှိသူက ခိုးပြေးကာ ဘာသာလည်းသိမ်းသွင်း၊ အမည်နာမလည်း ပြောင်း စိတ်တိုင်းကျ ပြုကျင့်ပြီးမှ လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခဲ့သူအား သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသောမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးလေးကို အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်မွတ်ကုလား သားမယားရှိသူက ခိုးပြေးကာ ဘာသာလည်းသိမ်းသွင်း၊ အမည်နာမလည်း ပြောင်း စိတ်တိုင်းကျ ပြုကျင့်ပြီးမှ လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခဲ့သူအား သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ်
အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသောမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးလေးကို အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်မွတ်ကုလား သားမယားရှိသူက ခိုးပြေးကာ ဘာသာလည်းသိမ်းသွင်း၊ အမည်နာမလည်း ပြောင်း စိတ်တိုင်းကျ ပြုကျင့်ပြီးမှ လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခဲ့သူအား သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ်
သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ် ။ သူ့လိုကောင်တွေကြောင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အထိဂရုန်း များဖြစ်ရင် လူများစွာသေစေနိုင်သောကြောင့် စံပြအနေဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးသင့်ပါ သည်။
Wira Thu added4new photos — with A Shin Visethta and 17 others https://www.facebook.com/ven.wirathumsy/posts/600130720130440
“အိစန္ဒာလေးကို ခိုးပြေးတဲ့မွတ်ကုလားဂျာဖာလ် ရုံးထုတ်ပြီ”
13.12.2014 ရက်နေ့က ခိုးပြေးတဲ့ မွတ်ကုလားဂျာဖာလ်ကို 29.1.2015 မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှာ စတင်စစ်ဆေးပါပြီ။
ပုဒ်မ ၃၆၆ နှင့် စတင်စစ်ဆေးနေပြီး ၃၇၆ ပုဒ်မအတွက် ဆက်လက်ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
12.1.2015 ရက်နေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ဟောင်းလေးကို ပူးတွဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
2.1.2015 ရက်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ သတင်းလေးထဲက ပန်းမုဆိုး မွတ်ကုလားကို ဖမ်းထားပါပြီ။
4.1.2015 ရက်နေ့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ဂန်ရွာ(ချမ်းတောင်ရပ်ကွက်)မှာ ဖမ်းမိတာပါ။
(ပ) ၇/၂၀၁၅။ပုဒ်မ ၃၆၃၊ ၃၆၆ နှင့် အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
5.1.2015 ရက်နေ့မှာ အိုးဘိုထောင်ပို့ပြီး ဥပဒေအကြံတောင်း တင်ထားပါတယ်။
မွတ်ကုလားရဲ့ အမည်က အာကာထက်(ခ)ထက်ထက်(ခ)အေးထွန်းဦး(ခ)ဂျာဖာလ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် သားမယားရှိသူဖြစ်ပြီး၊ အိစန္ဒာ(၁၅)နှစ် သမီးလေးကို ခိုးပြေးကာ ဘာသာလည်းသိမ်းသွင်း၊ အမည်နာမလည်း ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပါ။
ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ခင်ဦး၊ မြစ်ကြီးနားကိုခေါ်သွားပြီး စိတ်တိုင်းကျ ပြုကျင့်ပြီးမှ မိန်းကလေး အိစန္ဒာကို ရှမ်းကလေးကျွန်းမှာ ကားပေါ်မှ ချပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တာပါ။
မိန်းကလေး အိစန္ဒာလေးရဲ့ မိုးဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာ သိမ်းထားပြီး၊ လူကိုပဲ ပြန်လွှတ်လိုက် တာပါ။
မုဆိုးမမိခင်ကြီး ဒေါ်မြထွေးက ရဲစခန်းသွားတိုင်တော့ ကုလားက ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိ ဘယ်ဆက်သွယ်ရမှန်း မသိလို့ ငိုကြီးချက်မနှင့် ကျောင်းရောက်လာတာပါ။
အခုတော့ တာဝန်သိ မျိုးချစ်ပြည်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးနှင့်ဂန်ရွာ မူဆလင်အကြီးအကဲတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုတို့ကြောင့် မုဆိုးမကြီး ရင်အေးရပါပြီ။
You, Win Maw Shwethanzin, John Tin Win and 47 others like this.
တိမ် ယံ ‘အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအော်နေကြတဲ့မိမစစ်ဖမစစ်ဇင်မာအောင်တို့ဘယ်သွားသေနေကြလဲ
58 mins · Like · 7
ကိုကို ပုလဲ ခွေးသားသတ်ပစ်ရမှာ
Chit Myat မွတ်အခွင့်အရေးသမားကြီး မွတ်ဆုကို
Sithu Maung ဇင်မာအောင်တို့ခင်ခင်လေးမော်လီတို့ကမွတ်ကုလားတွေနဲ့ကွေးနေတယ်လေ
45 mins · Like · 4
မင်း ဆန်း ပါး မင်္ဂလာပါဘဲဘုရား
Sithu Maung အဲဒီဖေလိုးမတွေအကြောင်းရေးရတာလက်သနလို့
Sithu Maung အရှင်ဘုရားနဲ့fbကဘော်ဒါတွေကိုတော့အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်
Sunny Shine ကုလားတွေက ဗျူဟာတခုအနေနဲ့ မြန်မာမကို ယူတာ..ကုလားတယောက်နောက်မှာ အဖွဲ့အစည်း ကွန်ယက်ရှိတယ်..မြန်မာမတွေက တဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ယူတာ..မြေခွေးနဲ့ သမင်ပျိုပမာပဲ..ဆရာတော်တွေက ရှေ့ထွက် ကာကွယ်နေသလောက် နောက်ကနေ ပါသွားနေတာ မလွယ်တော့ဘူး..အားလုံးပါဝင်ကြပါ..အသိတရားလေးပဲ ရှိရင် ဖြစ်နေပါပြီ..
Myo Htike Tan Thein သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ် ။ သူ့လိုကောင်တွေကြောင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အထိဂရုန်း များဖြစ်ရင် လူများစွာသေစေနိုင်သောကြောင့် စံပြအနေဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးသင့်ပါ သည်။
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 31/01/2015 .
← Burma to United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee	အရေးကြီးသတင်း >>> ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် မွတ်ကုလားတွေကိုစစ်အစိုးရကအကွက်ကျကျ ပိုက်ဆံပေးခိုင်းစေနေပါတယ် →